ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ လူသတ်ပြီး တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာဖြုန်းတဲ့လုပ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်တယ်.... (ဆောင်းပါးရှင် မောင်မောင်ဝမ်း) ~ ဒီမိုဝေယံ
ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ လူသတ်ပြီး တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာဖြုန်းတဲ့လုပ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်တယ်.... (ဆောင်းပါးရှင် မောင်မောင်ဝမ်း)
ပြည်တွင်းစစ်ဆိုတာ လူသတ်ပြီး တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာဖြုန်းတဲ့ လုပ်ရပ်သာလျှင်ဖြစ်တယ်
ကျနော် ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှုးအောင်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တုန်းက သတိရမိတာလေးတခုပါ….။ သူက ဦးနေ၀င်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမုန်းဆုံးအရာ တခုကို ကောက်ချက် ပေးပါတယ်။
ကျနော့်နားထဲမှာ… ဗိုလ်မှုးအောင်.. ပြောခဲ့တဲ့ အာဏာစက်ကျဉ်းမှာကို ကြောက်တယ်ဆိုတဲ့ စကားကစွဲထင်နေ မိတယ်။ တကယ်တော့ တော်တော်တရားကျစရာ ကောင်းတဲ့ အဖြစ်တွေပါ…ဒါတွေဟာ ပဒေသရာစ် စိတ်မကုန်သေးတဲ့ အတွေးအခေါ်များသာလျှင် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်…။ ခေတ်အဆက်ဆက် ရိုက်သွင်းလာတဲ့ ၀ါဒဖြန့်ချီရေး တခုရှိသေးတယ်…။ နယ်ချဲ့ဆိုတဲ့အရာ… ကိုယ့်ကို နယ်ချဲ့လာမှာကိုကြ… တွေးပြီးတောင် ကြောက်နေကြတယ်…။ ကိုယ်က နယ်ချဲ့ခဲ့တာကိုတော့ အားရပါးရ ချီးမွမ်းလို့မဆုံးဘူး….။ ဗမာ ဘုရင်တွေလက်ထက်မှာ သူများနယ်မြေ အင်ပါယာတွေကို သွားနယ်ချဲ့…. သူရဲကောင်းကြီးတွေ လုပ်ကြတဲ့လုပ်ရပ်ဟာ… ကောင်းတဲ့လုပ်ရပ်လား စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ သူတို့သူရဲကောင်းဆိုတာ….(အခုသူတို့လည်း မသိနိုင်တော့ပါဘူး… သေကုန်ကြ ပြီပဲဟာ) မသေပဲကျန်ရစ် အသက်ရှင်နေသေးတဲ့ သူတွေမှာတော့ ဘာမသိညာမသိ… အနှိပ်စက်ခံနေရတုန်း…။ အသတ်ခံနေရတုန်း (ထိုင်းနိုင်ငံမှာ… နှစ်ပေါင်း သုံးရာကျော်လောက်က ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စက… အခုထိမြန်မာနိုင်ငံသား တွေအတွက် ခံနေရဆဲ….. နယ်ချဲ့ခဲ့လို့ အဲဒီ့ သူရဲကောင်းတွေ အကျိုးရှိ မရှိတော့မသိဘူး။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ အခု အလုပ်သွားလုပ်နေတဲ့ အလုပ်သမားများစွာတော့… အခုထိ ခံနေရတုန်းပါ )
အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း ပြည်တွင်းစစ်မီးတွေ တောက်လောင်နေတော့… စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ ဗိုလ်မှုးအောင် ပြောခဲ့တဲ့ စကားက မှန်နေပြီ။ လက်ရှိ တက်လာတဲ့ အစိုးရသစ်ကလည်း မြစ်ဆုံကိစ္စ၊ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အနည်းငယ် လွှတ်ပေးတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့… နည်းနည်းလေး ချီးကျူးမယ်မှ မကြံရသေးဘူး။ ကချင်အပါဝင်… တိုင်းရင်းသား နယ်မြေတွေဘက်မှာ ထိုးစစ်တွေ ဆင်လိုက်တာ… သေလိုက်ကြတဲ့သူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေနည်းလားဗျာ သူတို့ အာဏာစက် ကျယ်ချင်တာနဲ့ ပေးဆပ်နေရတဲ့ စစ်သားတွေ ပြည်သူတွေ၊ တိုင်းရင်းသားတွေ လက်ရှိတပ်မတော်သားတွေလည်း စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်သင့်တဲ့၊ ဆင်နွှဲသင့်တဲ့ စစ်ပွဲတွေလား တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာတွေ အများကြီး ဆုံးရှုံးနေယုံမက လူတွေလည်း သေကျေဒုက္ခ ဆင်းရဲတွေနဲ့ ဆုံနေရပါပြီ။ တဘက်ထဲတင်မဟုတ် နှစ်ဘက်လုံး တလောက ကေအိုင်အေက ဖမ်းမိတဲ့ စစ်သားတွေကို ဗွီဒီယိုမှာ ကြည့်လိုက်ရတော့ စိုးရမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့ မျက်လုံးတွေ… အသွင်ပြင်အမူအရာတွေ ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလည်း ဒါဟာပြည်တွင်းစစ်မီး ဖန်တီးနေသူ မည်သူမဆို… တာဝန်ရှိတယ်။ ကျနော်ဆောင်းပါးလေး တပုဒ် အင်တာနက်ကနေ ဖတ်လိုက်ရတာရှိတယ်….ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကာလက ဂျာမဏီ အာဏာရှင်ကြီး ဟစ်တလာ အမြဲပျော်နေတတ်တဲ့ တချိန်ရှိတယ်တဲ့။ သူ့ဘေးက စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေက ကမ္ဘာ့မြေပုံကြီးကို တုတ်နဲ့ ထောက်ထောက်ပြီး သူတို့သိမ်းပိုက်ထားတဲ့ နယ်မြေတွေကို အရောင်ခြယ် ရှင်းလင်းပြသနေချိန်ဆို ဟစ်တလာ မျက်နှာကြီးက ၀င်းပနေတာပဲတဲ့ ကျနော်ကတော့ တွေးမိလိုက်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးစစ်ရှုံးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သေကြောင်းကြံရမယ့် အဖြစ်ကို သူမှကြိုမသိနိုင်တာကိုး။
အခုလည်း လက်ရှိ မြန်မာအစိုးရက ကျန်တာတွေကိုတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အနည်းအကျဉ်း ဆောင်ကျဉ်း ပေးထားပြီးခါမှ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်ကိစ္စတွေမှာ… အာဏာစက် ကျယ်ချင်နေတာလား။ ကချင်နယ်မြေကို အကြီးအကျယ် ထိုးစစ်ဆင်ဘို့ တရုတ်အကူညီနဲ့ ဗမာစစ်သားတွေကို တရုတ်နိုင်ငံထဲပို့ လူသတ်ဘို့ ကြံစည်ကြပြန်ပြီ။ ကေအိုင်အေကို အပြီးသတ် ချေမှုန်းလို့ရနိုင်ပါသလား စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။ နယ်မြေတွေကို သိမ်းပိုက်ယူလို့ ရချင်ရင် ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ လွတ်မြောက်လိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တွေကို ချေမှုန်းလို့ရနိုင်ပါသလား။ ထို့အတူပဲ ကရင်၊ ရှမ်း၊ မွန်၊ ရခိုင်၊ ကယား သူတို့တတွေရဲ့ ယုံကြည်မှု နှလုံးသားတွေကို ဘယ်လက်နက်နဲ့ အမြစ်ပြတ် ချေမှုန်းကြမလည်း။
လူဆိုတဲ့.. သတ္တ၀ါဟာ… လောကကို မလွန်မြောက်သေးခင်မှာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေနဲ့ ရှင်သန်နေရတာပါ။ ဒါသဘာဝပါ… တခါတလေ… အလကား နေရင်းတောင်မှ ဒေါသကထွက်နေတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့… အလိုမကျလို့… အလိုတွေကို မဖြည့်ဆီးနိုင်လို့…. လူတွေအတင်း ပြောကြတယ်ဆိုတာ မိမိဒေါသတွေကို အစာကြွေးကြတာပါ။ မိမိဒေါသတွေဆိုတဲ့ အစစ်အမှန်ကိုမမြင်ပဲ သူများတွေကို လက်ညှိုးထိုးပုံချ လိုက်တာ။ သာမာန်လူတွေမှာ သိပ်ပြသနာ မရှိနိုင်ပေမဲ့… အာဏာကို ဆုတ်ကိုင်ထားတဲ့ သူတွေမှာ… ပြသနာ အကြီးအကျယ်ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့လောဘ ဒေါသ မောဟ တွေအတွက် သူများတကာတွေကို ခုတုန်း လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ နိဂုံးတွေဟာ ကောင်းမွန်ပါသလား။ မဝေးသေးတဲ့ကာလ တွေကိုပဲ လှမ်းမျှော်ကြည့်ရအောင်။
အီရတ်က ဆဒတ်ဟူစိန်ဟာ ကြိုးစင်ပေါ်ကို အပြုံးမပျက် တက်သွားတာ ဟုတ်ပါရဲ့လား (သူ့ကိုကြိုးပေးတဲ့ ဗွီဒီယိုခွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သွေးလေ ခြောက်ချား နေတယ်ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်)။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အိုစမာဘင်လာဒင် သူလူတွေ အများကြီးသတ်ခဲ့တုန်းက… သိပ်ဂုဏ်ယူ သိပ်ပျော်ခဲ့မှာပါ…။ သူကတော့ တရားသောစစ်ပွဲလို့ ထင်နေမိတာကိုး။ ဒါပေမဲ့ သူသေခါနီးမှာ လုပ်ရဲရင် ခံရဲတယ် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ အသေခံသွားတာလား (မဖြစ်မနေ သေရတော့မဲ့ အချိန်မှာတောင် ကိုယ်ချစ်လို့ ယူထားတဲ့ မိန်းမကို ဓါးစာခံ လုပ်သေးတယ်….)။
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြည်တွင်းစစ်မီးကြီးဟာ တော်သင့်လောက်ပါပြီ။ ဖြေရှင်းလို့ မရနိုင်ဘူးဆိုတာ မရှိပါဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဖြေရှင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီလိုမဟုတ်ပဲ အစောက ဗိုလ်မူးအောင်ပြောသလို မပြေလည်ချင်လို့ကို မပြေလည်နိုင်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ သတ်မှတ်ထားမယ် ဆိုရင်တော့ တိုင်းပြည်တိုးတက်ဘို့ဆိုတာ နည်းနည်းလေးမှ မစဉ်းစားပါနဲ့တော့ စကားတွေ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မီးဟာ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း အခြေနေ ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ…။ ငါးကို ခေါင်းပိုင်းနဲ့ အမြှီးပိုင်းယူဘို့ အငြင်းပွားနေချိန်မှာ ကြားထဲက မြေခွေးက ဒိုင်လူကြီးဝင်လုပ်ပြီး အငြင်းပွားနေသူ နှစ်ဦးကို… ခေါင်းနဲ့အမြှီးအညီ အမျှခွဲပေးလိုက်ပြီး သူကအလယ်က ၀မ်းဗိုက်သားယူသွားတဲ့ အဖြစ်လို့ တရုတ်ကွန်မြူနစ် အစိုးရက ၀င်အုပ်သွားမှာ မလွဲပါဘူး။
လွှတ်တော် ကျင်းပနေချိန်မှာ ပြည်နယ်ဒေသ အသီးသီးက တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဒီကိစ္စကိုဘာလို့များ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မဆွေးနွေးကြတာပါလိမ့်။ မြန်မာသတ်ပုံကျမ်း ကိစ္စလောက် အရေးမပါလို့လား ပြည်တွင်းစစ်အတွက် ကုန်ကျမဲ့ ငွေတွေ၊ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာတွေကို တခြားဟာတွေ ခနထားဦးဗျာ..။ နိုင်ငံသားတွေ ပညာတွေတော်ပြီး… တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး ကိစ္စရပ်များမှာ အသုံးချနိုင်ဘို့ ပညာတော်သင်တွေ စေလွှတ်လိုက်မယ်ဆို ဘယ်လောက်အကျိုး ရှိလိုက်မလည်း…..။
မိမိနိုင်ငံသားအချင်းချင်း တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း သတ်ဖြတ်နေတဲ့ စစ်ပွဲများကို အမြန်ဆုံးရပ်တန့်ပေးပါ။ ဒီစစ်ပွဲအတွက် ကုန်ကျနေတဲ့ ငွေတွေဟာ ပြည်သူတွေ သွေးချွှေးနဲ့ ရှာဖွေထားတဲ့ ငွေတွေဖြစ်တယ်။ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေလွှတ်ဘို့ ကတိက၀တ်တွေပေးပြီး ၀ိနည်းလွတ် အနည်းငယ် လွှတ်ပေးသည့် တိုင်နောက်ထပ် ဆက်လွှတ်ပေးဘို့ကိုလည်း ကတိခံနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်းမသတ် ဖြတ်ပါဘူးဆိုသည့် ကတိကိုတော့ လွှတ်တော်အပါဝင် မည်သည့်နေရာမှမျှ စိုးစဉ်းမျှ မကြားရပါ။
ပြည်သူတရပ်လုံးက ကျေးဇူးတင်နေကြမှာ မလွဲပါ….သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အပါဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိသူများခင်ဗျား…